Uyilo lwe-Maja Wronska yoyilo lwamanzi amdaka | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umbala wobugcisa bokwakha umbala kaMaja Wronska
Umzobi wasePoland kwimibala yamanzi UMaja Wronska iyaqhubeka nokupeyinta imbonakalo eqhumayo yemibala kuyilo lwaseYurophu. la Umculi wasePoland kunye ne-watercolor yakhe emangalisayo UMaja Wronska iyaqhubeka nokupeyinta imbonakalo eqhumayo yemibala kuyilo lwaseYurophu, njengaye Uyilo olwenziwe ngokwakho, isakhono esonyusa kakhulu umsebenzi wakhe wobugcisa. Uqala ngokwenza iqhekeza lakhe ngalinye njenge umzobo eneenkcukacha, kwaye ke kongeza eyakho Uluhlu lwamanzi, indlela yokuqikelela enokuba nzima ukuyilawula, ke Imizobo yakhe iba yinto engakholeleki ngakumbi.
Wazalwa ngoJanuwari 28, 1989. Waphumelela kwiYunivesithi yaseWarsaw yeTekhnoloji (Ityala lokuyila). Usebenza njenge umyili wezakhiwo e umzobi ezizimeleyo. Imizobo yakhe inxibelelene ngokusondeleyo kulwakhiwo, into ayithandabuzayo ukuba uyilo luphefumlelwe. Waqala ukuzoba nzulu ngexesha lokuzoba ngelixa esenza izifundo zakhe. Yayiyindlela awayechitha ngayo ngeempelaveki, nangorhatya ngexesha lesikolo esiphakamileyo.
Ukuqala kwam ukufunda ukuzoba ndabona ukusilela. Emva koko ndiye ndaqonda ukuba bendiphose kakhulu. Kuyamangalisa, kodwa ndizifumene ndenza umsebenzi ngolwesiHlanu okanye ngoMgqibelo kusasa, ndaza ndaya kwisidingo sokuzoba. Ndicinga ukuba ukukhuthazwa kwam kuza ngexesha elithile evekini, elidibanisa nesiqhelo.
Andinguye umakhi oyingcali. Ndithweswe isidanga kwi-Architecture kwiYunivesithi yaseWarsaw yeTekhnoloji. Ndidibene nomsebenzi wobugcisa kodwa yahlukile kunokupeyinta okanye ukuzoba. Kukho iikhosi zokuzoba kunye nepeyinti kwiminyaka emibini yokuqala, kodwa kunjalo. Umsebenzi wobugcisa unqunyelwe kuyilo loyilo oluhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umbala wobugcisa bokwakha umbala kaMaja Wronska
Iimpawu ezintathu ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa kuyilwa i icon